चुनावमा म्यादी प्रहरी भएकाहरुको भाग्य चम्कियो , सरकारले ल्यायो गजबको योजना ! – Ramailo Sandesh
चुनावमा म्यादी प्रहरी भएकाहरुको भाग्य चम्कियो , सरकारले ल्यायो गजबको योजना !
सरकारले एक पटक म्यादी प्रहरी भई देशको सेवा गरेकाहरुका लागी विशेष व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागी ल्याएको बजेटमा म्यादी प्रहरीका लागी विशेष व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधीसभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै लोकप्रिय कुराहरुका लागी बजेट विनियोजन गरेका छन् । उनले म्यादी प्रहरीका लागी विशेष प्याकेज घोषणा गरेका छन् ।
अन्तरास्ट्रिय संसारकै अचम्मको मान्छे,,हेर्नुहोस् दिमाग हिलाउने भीडियो……